Izindaba - Uphola kanjani umdlalo wezemidlalo emzimbeni wakho?
Izimpahla zemidlalo zipholisa kanjani umzimba wakho?
Isikhathi sasehlobo! Isikhathi sonyaka esivame ukuzwa futhi sibone igama elithi 'cool' lifakwa ezikhangisweni eziningi zemikhiqizo. Kusuka kumavesti, imikhono emifushane, izingubo zemidlalo, amabhulukwe, ngisho nokulala, konke kubhalwe izici ezinjalo. Ingabe indwangu enjalo yokuzwa okupholile iyafana ngempela nomphumela encazelweni? Futhi kusebenza kanjani lokho?
Masithole nge-MimoWork Laser:
Izingubo ezenziwe ngemicu yemvelo enjengokotini, i-hemp, noma usilika imvamisa kuyisinqumo sethu sokuqala sokugqoka ehlobo. Ngokuvamile, lezi zinhlobo zezindwangu zilula ngesisindo futhi zinokumunca okuhle ukujuluka nokungena komoya. Ngaphezu kwalokho, indwangu ithambile futhi ikhululekile ukugqoka nsuku zonke.
Kodwa-ke, ayizilungele ezemidlalo, ikakhulukazi ukotini, ongaqina kancane kancane njengoba ubamba umjuluko. Ngakho-ke, ngezingubo zezemidlalo ezisebenza kahle, kubalulekile ukusebenzisa izinto zobuchwepheshe obuphezulu ukukhulisa ukusebenza kwakho kokuzivocavoca umzimba. Kulezi zinsuku indwangu yokupholisa ithandwa kakhulu ngumphakathi.
Kubushelelezi futhi kusondele kahle futhi kunomuzwa opholile kancane.
Umuzwa opholile noqabulayo olethayo ungaphezulu ngenxa 'yesikhala esikhulu' ngaphakathi kwendwangu, okuhambelana nokungena komoya okungcono. Ngakho-ke, umjuluko uthumela ukushisa, ngokuzenzekelayo kuvele umuzwa opholile.
Izindwangu ezilukwe yi-fiber epholile ngokuvamile zibizwa ngokuthi izindwangu ezipholile. Yize inqubo yokweluka ihlukile, umthetho wezindwangu ezipholile ucishe ufane - izindwangu zinezici zokushiswa okusheshayo kokushisa, zisheshisa umjuluko wokuthumela, futhi zinciphise izinga lokushisa komzimba.
Indwangu epholile yakhiwa ngemicu ehlukahlukene. Isakhiwo saso sakhiwe ngenethiwekhi enesisindo esiphakeme njengama-capillaries, angamunca ama-molecule wamanzi ajule emgodini we-fiber, bese uwafaka esikhaleni se-fiber sendwangu.
Izingubo zemidlalo 'ezipholile' zizofaka / zishumeke izinto ezithile ezimunca ukushisa endwangu. Ukwehlukanisa izingubo zemidlalo "ezipholile" kusuka ekwakhiweni kwendwangu, kunezinhlobo ezimbili ezijwayelekile:
1. Faka intambo emaminerali efakiwe
Lolu hlobo lwezingubo zemidlalo luvame ukukhangiswa njenge- 'high Q-MAX' emakethe. I-Q-MAX isho ukuthi 'Ukuzwa Ukuthinta Ukufudumala noma Ukupholisa'. Uma kukhulu isibalo, kungaba okupholile kakhudlwana.
Isimiso ukuthi umthamo othize wokushisa we-ore mncane futhi uyashesha ibhalansi yokushisa.
(* Ukuncipha komthamo wokushisa othize, kunamandla kokumunca ukushisa noma ikhono lokupholisa lento; Ngokushesha ukulingana okushisayo, isikhathi esincane esidingekayo ukufinyelela izinga lokushisa elifana nelomhlaba wangaphandle.)
Isizathu esifanayo samantombazane agqoke izesekeli zedayimane / i-platinum ngokuvamile sizizwa sipholile. Amaminerali ahlukene aletha imiphumela ehlukile. Kodwa-ke, uma kubhekwa izindleko nentengo, abenzi bavame ukukhetha i-ore powder, i-jade powder, njll. Ngemuva kwakho konke, izinkampani zezemidlalo zingathanda ukuyigcina ingabizi kubantu abaningi.
2. Faka i-Xylitol
Okulandelayo, ake sikhiphe indwangu yesibili engezwa 'i-Xylitol'. IXylitol isetshenziswa kakhulu ekudleni, okufana nokuhlafuna ushungamu namaswidi. Ingatholwa futhi kuhlu lwesithako somuthi wokuxubha othize futhi uvame ukusetshenziselwa ukunambitheka.
Kepha asikhulumi ngalokho ekwenzayo njengesiphungumnandi, sikhuluma ngokwenzekayo lapho ixhumana namanzi.
Ngemuva kokuhlanganiswa kweXylitol namanzi, kuzodala ukusabela kokumuncwa kwamanzi nokumuncwa kokushisa, okuholele kumuzwa opholile. Kungakho i-Xylitol gum isinika umuzwa opholile lapho siyhlafuna. Lesi sici sitholwe ngokushesha futhi sasetshenziswa embonini yezingubo.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi isudi yezindondo 'iChampion Dragon' egqokwe yiChina kuma-Olimpiki aseRio ka-2016 iqukethe i-Xylitol ngaphakathi kwayo.
Ekuqaleni, izindwangu eziningi zeXylitol zimayelana nokumbozwa komhlaba. Kepha inkinga iza ngokulandelana. Kungenxa yokuthi i-Xylitol incibilika emanzini (umjuluko), ngakho-ke uma ithola incane, okusho ukuzwa okupholile noma okusha.
Ngenxa yalokhu, izindwangu ezine-xylitol ezifakwe kule micu zakhiwe, futhi ukusebenza okugezekayo kuthuthukiswe kakhulu. Ngaphezu kwezindlela ezahlukahlukene zokushumeka, izindlela ezahlukahlukene zokweluka zithinta futhi 'umuzwa opholile'.
Ukuvulwa kwama-Olimpiki aseTokyo kuseduze, futhi izingubo zemidlalo ezintsha kanjalo zithole ukunakwa okukhulu emphakathini. Ngaphandle kokubukeka okuhle, nezemidlalo kuyadingeka ukusiza abantu ukuthi benze kangcono. Eziningi zalezi zidinga ukusetshenziswa kwamasu amasha noma akhethekile kunqubo yokukhiqizwa kwezingubo zezemidlalo, hhayi nje izinto ezenziwe ngazo.
Yonke indlela yokukhiqiza inomthelela omkhulu ekwakhiweni komkhiqizo. Hola ucabangele wonke umehluko wobuchwepheshe ongasetshenziswa kuyo yonke inqubo. Lokhu kufaka ukuvela kwezindwangu ezingalukiwe, ukusika ngongqimba owodwa, ukufaniswa kombala, ukukhethwa kwenaliti nentambo, uhlobo lwenaliti, uhlobo lokuphakelayo, njll. I-logo yomkhiqizo ingafaka ukuphrinta kwe-phoenix, ukuphrinta kwedijithali, ukuphrinta kwesikrini, imifekethiso, laser ahlabayo, laser umbhalo, laser perforating, embossing, ama-applique.
I-MimoWork inikeza izixazululo ezilungile nezithuthukile zokucubungula i-laser zezemidlalo nejezi, kufaka phakathi ukusika kwendwangu ephrintiwe enembile, ukusika kwendwangu yedayi, ukusika kwendwangu nokunwebeka, ukusika okufekethisiwe, i-laser perforating, i-laser indwangu eqoshiwe.
Mimowork yinkampani egxile emiphumeleni eletha ubuchwepheshe bokusebenza obujulile beminyaka engama-20 ukunikela ngezixazululo ze-laser nezisombululo zokukhiqiza kuma-SME (amabhizinisi amancane naphakathi) ezingutsheni nezindawo ezizungezile, okwezimoto, kwesikhangiso.
Okuhlangenwe nakho kwethu okunothile kwezixazululo ze-laser kugxile ngokujulile ekukhangiseni, ezimotweni nezindiza, imfashini nezembatho, ukuphrinta kwedijithali, kanye nemboni yezindwangu zokuhlunga kusivumela ukuthi sisheshise ibhizinisi lakho lisuka kusu lokuya ekwenziweni kwansuku zonke.
Sikholelwa ukuthi ubuchwepheshe obunokushintsha okusheshayo, nobuchwepheshe obuqhamukayo ezimpambanweni zemigwaqo yokwenziwa, ubuchwepheshe, ubuchwepheshe kanye nezentengiselwano kungumahlukanisi. Sicela uxhumane nathi: Ikhasi eliyisiqalo le-Linkedin futhi Ikhasi eliyisiqalo le-Facebook noma info@mimowork.com
Isikhathi Iposi: Jun-25-2021